Dominoes 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny emulator.online
Ambin 'ny daomy. Ny lalao domino dia tena malaza eran'izao tontolo izao ary lalaovin'ny olona an'arivony. Amin'ny fivorian'ny mpianakavy, faribolan'ny namana, fety, barbecue, amin'ny faran'ny herinandro sns ...
Izy io dia mety ho iray amin'ireo lalao tranainy indrindra izay misy referansa.
Dominoes: ny fomba filalaovana tsikelikely😀
Inona ny atao hoe domino? 🙂
daomy dia lalao kilalao izay mampiasa sombin-javatra mahitsizoro, amin'ny ankapobeny dia omena hateviny izay manome azy ireo ny fanononana?, izay iray amin'ireo tarehy dia voamariky ny teboka manondro ny sanda isa.
Ny teny dia ampiasaina koa hanondroana tsirairay ireo sanganasa mandrafitra ity lalao ity. Mety avy amin'ny fomba fiteny latina ilay anarana "domino afaka" ("Misaotra ny Tompo"), hoy ny pretra eropeana nanamarika ny fandresena tamin'ny lalao iray.
Isan'ny mpilalao: 4
farantsa: Sombiny 28 misy sisiny manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 6.
Sombiny isaky ny mpandray anjara: Sasa 7 ho an'ny mpandray anjara tsirairay.
Tanjon'ny lalao: manaova isa 50.
Sombiny Domino: sombin-javatra vita amin'ny tendrony roa izy, samy manana isa (ohatra ny sombiny: 2-5, 6-6, 0-1).
Ahoana ny fametrahana ireo sanganasa?: rehefa apetraka eo akaikin'ny iray hafa izay misy iraisana farafahakeliny farafaharatsiny (ohatra: 2-5 mifanitsy amin'ny 5-6).
Mandalo ny anjarany: rehefa tsy manana sombin-javatra mifanentana amin'ny sisiny ny mpilalao.
Tapaka ny lalao: rehefa samy tsy misy mpilalao manana sombin-javatra mifanentana amin'ny sisiny tsirairay.
Iza no mandresy amin'ny lalao?: rehefa mahavita mihintsy ny sombin-kazo iray eny an-tànany ny iray amin'ireo mpilalao, rehefa namboatra azy rehetra.
Ahoana ny fomba filalaovana domino?🁰
Ireo "sombintsombiny" dia voahitsaka "ambony latabatra, ary raisin'ireo mpilalao tsirairay Sasa 7 hilalao. Ny mpilalao manomboka ny lalao dia ilay manana sombiny 6-6🂓. Atombohy ny lalao amin'ny fametrahana ity sombin-javatra ity eo afovoan'ny latabatra. Avy any, milalao mifanohitra amin'ny famantaranandro.
Ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy manandrana mampifanaraka ny sombiny sasany amin'ny sombin-javatra amin'ny faran'ny lalao tsirairay. Rehefa mahay mifanaraka amin'ny sombin-javatra iray ny mpilalao ny anjarany dia ampitaina amin'ny mpilalao manaraka. Raha tsy manana sombina mifanaraka amin'ny andaniny ny mpilalao, tsy maintsy mandalo ny anjarany, tsy milalao sombin-javatra.
El lalao afaka mifarana amin'ny toe-javatra roa: rehefa mahay mandresy ny lalao ny mpilalao, na rehefa mihidy ny lalao. Ny mpilalao voalohany amin'ity indray mitoraka ity dia ny mpilalao eo ankavanan'ny mpilalao voalohany amin'ny lalao teo aloha.
Raha misy mpilalao mandresy ny lalao: ny ekipanao dia mandray ny isa rehetra avy amin'ireo sombin-javatra izay eny am-pelatanan'ny mpanohitra.
Raha mihidy ny lalao: ny isa rehetra azo isaky ny mpivady dia isaina.
Ny mpivady manana isa kely indrindra no mpandresy ary mandray ny isa rehetra an'ny mpivady mpanohitra. Raha misy fatorana amin'ity isa ity dia resy ilay mpivady nanakana ny lalao ary ny mpivady mpandresy dia mandray ny isa rehetra amin'ity mpivady ity. Nangonina ny isa an'ny mpivady mandresy ary mifarana ny lalao rehefa tonga amin'ny marika 50 isa ny iray amin'ireo mpivady.
Ny sandan'ny teboka isaky ny sombin-javatra dia mifanaraka amin'ny sandan'ny sanda amin'ny faran'ny roa amin'ilay sanganasa. Noho izany, ny sombiny 0-0 dia mendrika isa 0, ny sombin-javatra 3-4 dia isa 7, ny sombiny 6-6 dia isa 12, sns.
Manana mpandray anjara efatra ny lalao, izay mandrafitra tsiroaroa ary tokony hipetraka amin'ny toerana hafa izy ireo.
ny teoria eken'ny beso indrindra dia ny hoe niseho tany Chine teo anelanelan'ny 243 ka hatramin'ny 181 talohan'i Kristy , noforonin'ny miaramila iray antsoina hoe Hung Ming.
Tamin'izany fotoana izany, ireo sombin-javatra ireo dia nitovy tamin'ny filalaovana karatra, famoronana iray hafa an'ny firenena, ary nantsoina mihitsy aza izy ireo "litera tototry" .
Any andrefana, tsy misy firaketana ny domino mandra-pahatongan'ny taonjato faha-XNUMX, rehefa niseho tao Frantsa sy Italia, mazava kokoa ao amin'ny lapan'ny Venise sy Naples, izay nanaovana ny lalao ho fialamboly.
Ny fijanonana manaraka dia toa ny Angletera, natolotr'i Voafonja frantsay tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX.
Manomboka eo dia miankina amin'ny fisainantsika sy ny fahalalantsika ny tantara izany, fa ny mpifindra monina ihany no azontsika fisaorana, fandraisana na tsia, izay nitondra ny lalao tany amin'ny tany Espaniôla.
Lalao sy haingon-trano
Blaogy kely, fisaka ary mahitsizoro, Ny domino dia azo atao amin'ny fitaovana samihafa, toy ny hazo, taolana, vato, na plastika.
Ny kinova faran'izay kanto kokoa, nasain'ny mpitia lalao sy mpanangom-bokatra, vita amin'ny marbra, granite ary savony.
Ireo santionany voadio ireo dia matetika fonosina anaty boaty ho an'ny tena manokana, mazàna vita amin'ny volory, ary aseho ho toy ny tena haingon-trano.
Toy ny karatra filalaovana misy karazany, ny domino dia mitondra marika famantarana amin'ny lafiny iray ary banga amin'ny lafiny iray.
Ny tarehy mitondra ny maha-izy azy avy amin'ny sombin-javatra tsirairay dia mizara, amin'ny tsipika na ambony, ho efamira roa, ny tsirairay amin'izy ireo dia voamarika amina andiam-teboka, toy ireo izay ampiasaina amin'ny angona, afa-tsy ny efamira vitsivitsy sisa tavela. fotsy.
Ao amin'ny kinova Eoropeana amin'ny lalao, misy sombin-javatra fito hafa noho ny amin'ny Sinoa, mitotaly 28 isa.
Raha ny vato manana isa ambony indrindra amin'ny domino mahazatra antsika dia 6-6🂓, indraindray andiany lehibe kokoa misy hatramin'ny 9-9 (faritra 58) ary hatramin'ny 12-12 (91 sanganisa) no ampiasaina.
Ny Inuit of North America dia milalao kinova domino mampiasa set izay misy sanganasa 148.
Any Sina, izay toa tsy misy farany ny famoronana ny lalao, ny Dominoes koa dia niasa ho toy ny fototra sy maodely amin'ny lalao mitovy nefa sarotra kokoa: mahjong .
Inona avy ireo tombony sy fatiantoka entin'ny domino?
Ny lalao rehetra dia misy ny tombony sy fatiantoka, na dia ny taloha toa ny domino aza. Ny tombony dia manodidina ny harenan'ny lalao ary ny fatiantoka dia ny mampiavaka azy manokana.
Manomboka amin'ny tombony, ny iray amin'izy ireo dia lalao ho an'ny sokajin-taona rehetra, satria mora ny mahatakatra, mivory ary mitantana mora foana, nefa miaraka amina paikady marobe hampifaly ireo izay milalao lava kokoa.
Ao anatin'ity sokajin-taona goavambe ity dia misy tombony maro kognitive, toy ny fanentanana ny fampandrosoana lojika-matematika ho an'ny zandriny indrindra sy lojika stratejika ho an'ny olon-dehibe ary fahatsiarovana ho an'ny be antitra.
Farany, lalao azo ampiharina io. Amin'ny sehatra mahitsy sy mpilalao roa farafaharatsiny, dia ho ampy hanombohana ny lalao izany.
Fa na ny lalao misy tombony be dia be aza dia misy zavatra kely manelingelina. Manomboka amin'ny zava-misy mpilalao efatra fotsiny no ao, farafaharatsiny amin'ny ankamaroan'ny fanatanjahantena. Sarotra ny mampiala voly vondrona marobe, ohatra.
Ny lesoka iray hafa dia ny "finesse" hametrahana ny lalao, toy ny ankamaroan'ny lalao kilalao na koa lalao kilalao. Miangona ireo sombin-javatra nefa tsy misy karazana fametahana. Vaky tampoka tampoka eo ambony latabatra io ary izay.
Ireo sombin-javatraRaha ny marina dia manelingelina ny tenany izy ireo, farafaharatsiny rehefa very izy ireo, satria kely, na reraka, very ny fahitana azy na ny sandany aza, amin'ny hevitr'ireo teboka ireo.
Tombony azo avy amin'ny kognitifa
Fivoriambe mora sy fikirakirana
Sombiny very sy / na tonta
Ny hosoka malaza indrindra amin'ny Internet
Finday henjana indrindra, telefaona tsy mety simba: iza amin'ireo no tokony hofidina
Ahoana ny fampiasana Google Lens amin'ny Android sy iPhone / iPad
OLED na QLED: inona ny teknolojia tsara indrindra ho an'ny fahitalavitra vaovao?